okwu M IP IS dot Com
Usoro ihe eji enyere m aka
Ojiri weebụ a ("Site") nyere site na Pk Holding BV ("Ụlọ ọrụ ahụ") na / enwere ike iji ya maka naanị maka ozi. Site n'iji saịtị ma ọ bụ nbudata ihe sitere n'Ịntanet, ị kwenyere ịgbaso usoro na ọnọdụ dị na ọkwa a.
Ojiji nke My-IP-is.com
Enweghị ọdịnaya nke saịtị weebụ a bụ ikikere nke Ụlọọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ na-enye ozi na saịtị ahụ. Ndị ọrụ na-eji saịtị ahụ na-enye ikike ikikere na-enweghị ikikere iji saịtị yana ọdịnaya ya maka iji aka nke onwe na-abụghị nke azụmahịa.
Nbudata na-akpaghị aka nke ọdịnaya Site maka nzube nke ịchọpụta adreesị IP na-enweghị enyemaka mmadụ. Ọ bụrụ na ị na-ede ihe ngwanrọ na-achọ ịmepụta adreesị IP nke na-akpaghị aka, biko jiri ebe nrụọrụ weebụ na-enye ikikere ụdị ọrụ a.
Ndị ọrụ nwere ike ibipụta ọdịnaya site na saịtị a.
Ewezuga dị ka enyere na Usoro ndị a, enwere ike ịmegharịgharị, ree, gbanwere, gbanwee, redistributed, weghachite, bipụtara, ma ọ bụ mee ihe maka nzube ọ bụla n'ekweghị ikikere e dere ede nke PK Holding BV ma ọ bụ onye nwe ihe ọmụma ahụ kwesịrị ekwesị.
Ịnweta na ịmepụta saịtị a
A na-ahapụ njikọ na ịkekọrịta.
Njikọ nke saịtị nke atọ
Njikọ na saịtị ndị ọzọ nke onwe ha na-arụ ọrụ, ndị ọzọ nọ na ibe weebụ a. Mgbe Ụlọ ọrụ na-enye njikọ ndị a dị ka ọrụ ndị ọrụ nke saịtị a, Ụlọ ọrụ adịghị achịkwa njikọ ndị a jikọtara ha, ọ bụghịkwa maka ọdịnaya dị na saịtị ndị a. Ọ gwụla ma e gosipụtara ya, Ụlọ ọrụ adịghị akwado, kwado, ma ọ bụ ma ọ̄ bụ mee ka o doo anya na ihe ọ bụla ma ọ bụ ọdịnaya dị na saịtị a jikọtara. A ga-eji saịtị ndị a, gụnyere ozi, ihe, ngwaahịa na ọrụ dị n'ime ya, naanị na njiri onwe onye ahụ.
Ezighị ezi na Njehie
Ihe ndị dị na saịtị a nwere ike ịnwe enweghị nchedo na njehie ederede. Ụlọ ọrụ adịghị akwado ikike zuru oke ma ọ bụ izu ezu nke ihe ndị ahụ ma ọ bụ ịdabere na ndụmọdụ ọ bụla, echiche, nkwupụta, ma ọ bụ ozi ndị ọzọ egosipụta ma ọ bụ kesaa site na saịtị. Ị kwenyere na ndabere ọ bụla na echiche ọ bụla dị otú ahụ, ndụmọdụ, nkwupụta, ma ọ bụ ozi ga-abụ naanị ihe ize ndụ gị. Ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike, naanị ya, iji dozie nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla na saịtị. Ụlọ ọrụ nwere ike ime mgbanwe ọ bụla na saịtị, ihe ndị dị n'Ịntanet, na ngwaahịa, mmemme, ọrụ, ma ọ bụ ụgwọ (ma ọ bụrụ na ọ bụla) akọwapụtara na saịtị n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa.
A na-enye saịtị a na ihe ọmụma na ihe ndị dị n'Ịntanet ka "BỤ ezie" na-enweghị ihe nnọchiteanya ma ọ bụ ikike, kwupụta ma ọ bụ gosi, ụdị ọ bụla, gụnyere, ma ọ bụghị njedebe na, ikike nke ahịa, nkwụsị, ma ọ bụ ahụike maka nzube ọ bụla.
Ọ dịghị ihe ọ bụla PK Holding BV ga-enwe ike ịdabere na ụlọ ọrụ ọ bụla maka kpọmkwem, ọpụpụ, pụrụ iche, njedebe, ma ọ bụ mmebi ndị ọzọ metụtara njikọ nke, ma ọ bụ enweghị ike iji, ọdịnaya, ihe onwunwe, na ọrụ nke saịtị ma ọ̄ bụ saịtị ọ bụla jikọtara ya, ọ bụrụgodị na a gwara Kọmịlọn n'ụzọ doro anya na o nwere ike imebi ihe ndị ahụ.
Mgbanwe na Usoro ndị a
A na-emelite Usoro Okwu a maka emelite ikpeazụ March 28, 2018 ma dochie ọ bụla Usoro Ojiji. A pụrụ imezi Usoro nke iji mee ihe n'oge ọ bụla; mgbe a gbanwere mgbanwe dị otú a, a ga-ezigagharịrị mbipụta a na saịtị a. Mgbanwe ga-adị irè mgbe a na-eziga ha. Ọ bụ ọrụ gị iji nyochaa Usoro nke iji site n'oge ruo n'oge iji mara mgbanwe dị otú ahụ. Ịnọgide na-eji saịtị a egosi nkwekọrịta gị na mgbanwe ndị dị otú ahụ.